काठमाण्डौको नयाँ बसपार्कस्थित एउटा होटलमा घटेको यो अनौठो घटना, जसले प्रहरी र आफन्तलाइ समेत बनायो चकित ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/काठमाण्डौको नयाँ बसपार्कस्थित एउटा होटलमा घटेको यो अनौठो घटना, जसले प्रहरी र आफन्तलाइ समेत बनायो चकित !
काठमाडौँ महानगरपालिका–४ चुनदेवी बस्ने शक्तिराज रेग्मीले विभिन्न मानिसबाट लिएको रकम तिर्न नपरोस् भनेर अ’पहरणमा परेको नाटक गरेको खुल्न आएको छ । रेग्मी असार २४ गतेदेखि हराएका थिए । परिवारले अ’पहरण परेको हुनसक्ने भन्ने व्यहोराको निवेदन साउन ४ गते महानगरीय अपराध महाशाखामा बुझाएका थिए ।
यस विषयमा अनुसन्धानका लागि महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई गएराति होटलबाट पक्राउ गरेपछि अ’पहरणको नाटक गरेको रहस्य खुलेको हो । रेग्मी असार २४ गते घरबाट निस्की सम्पर्कविहीन भई अ’पहरणको नाटक गरी नयाँ बसपार्कस्थित सुगन्ध होटलमा युवतीसँग बसेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउपछि अनुसन्धान गर्दा रेग्मीले विभिन्न व्यक्तिसँग जग्गा व्यवसाय गर्छु भनी करोडौँ रुपैयाँ लिएको र पैसा तिर्नु नपरोस् भनी अपहरणको नाटक गरेको खुलेको महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । अपहरणमा नपरेको तथा प्रहरीलाई अनावश्यक हैरानी दिई राज्यको स्रोतसाधनको दुरूपयोग भएकाले सोहीअनुसारको मुद्दामा उनीमाथि थप अनुसन्धानका लागि आज प्रहरीमा बुझाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।